Ruush State University for Humanities ah - Study Abroad
Ruush State University for Humanities ah
Ruush State University for Details Humanities ah
gaabinta : RSUH
Ha iloobin in aad wada hadlaan Ruush State University for Humanities ah
Qorto Ruush State University for Humanities ah
ussian State University for Humanities koray out of Moscow Institute for State History iyo Archives. Its dhalashada rasmiga ah waa 27 March 1991.
Wareeggii kowaad ee ogolaanshaha galay RSUH ka dhacay 1991. Inkasta oo ay da'doodu ka yar yar eego, RSUH ayaa u yimid inuu noqon mid ka mid ah ugu wanaagsan ka mid ah jaamacadaha ugu ixtiraamo ee dalka, isagoo muuqday oo ka mid ah xarumaha waxbarasho iyo cilmi baarista keentay in Russia. Our University ahaa kii ugu horeeyay ee dalka in la isu geeyo ereyada "Ruush" iyo "aadamaha" in ay magaca. Waxaan ku hanweynahay oo sharaf inuu qaado horyaalka this, weligiisba ku dadaalaya in ay sii xaqiijin our xaaladda. horumarka aan ka dhigay la aqoonsan gudaha dalka iyo dibadda. In dhan sano ee lasoo dhaafay RSUH ayaa mid ka mid ah hay'adaha ugu sough-ka dib ka mid ah ardayda la filayo. Oo annaguna waxaannu kugu waajib ma ahan oo keliya in nafo laakiin sidoo kale si ay u horumariyaan oo ay kobciso dhaxalgal ah oo aannu ku soo galo tobanka sano ee saddexaad ee taariikhda.
mabaadii'da waxbarashada University:
The European nidaamka waxbarashada laba heer- (B.A. - M.A.) dareemi kordhiyaa tirada noocyada kala duwan ee tababarka iyo bixisaa suurtogal ah inaad wax ka barato oo camal dibadda.
Midaynta cilmi-baarista iyo waxbarashada ogolaanayaa ardayda in ay horumariyaan xirfadaha cilmi-baarista iyo u bartaan set lagama maarmaanka ah ee kartida.
Sustainability iyo interdisciplinarity waxaa wakiil dhismaha midaysan waxbarasho sida soo horjeeda barnaamijyo taxane ah oo aan la xiriira khaas ah.
Practice-oriented hab si ay kuwan raadkaygay waxbarasho ku salaysan yahay isku-dar ah si taxadar leh u abuuray ee aqoon aasaasi ah iyo gacan-ku xirfadaha.
Jawiga waxbarasho ee sahla waxbarashada, oo ku salaysan yahay fikradda ah xoriyadda hal abuur leh oo xirfad is-actualization iyo mabaadi'da is afgarasho.
Ardayga-oriented nidaamka waxbarashada oggolaanayaa in laga faaiidaysanayo gelin kartida gaarka ah ee ardayda ku. Jaamacadda waxay leedahay nidaam barahaaga firfircoon.
Fikradda nolosha-dheer waxbarasho u arka waxbarashada sida sii iyo uninterrupting geedi. RSUH waxay bixisaa waxbarashada diyaarinta ah ee ardayda la filayo, sii barnaamijyada waxbarashada iyo sidoo kale ka qalin iyo kuwan raadkaygay postgraduate. Barnaamijyada shaqeeyaan labadaba Moscow iyo gobollada.
Mabda'a ah "waxbaridda farshaxan" ayaa waxay keentay in la abuuro jawi tababar gaar ah - barayay matxafyada iyo xafladaha muusigga bandhig.
Institute for History iyo Archives
Division ee Daraasaadka arkiifiyo
Division ee Daraasaadka Warqadaha
Division for Archives iyo Technology Kaydinta Warqadaha
Division for Taariikhda, Cilmiga Siyaasadda iyo Sharciga
dugsiga sare ee warqadaha iyo warqadaha bixinta managment
Institute for History iyo Philology
Division for History iyo Philology
Division for af iyo qoraal Applied Luuqadaha
Machadka dhaqaalaha, Maamulka iyo Sharciga
Division of Xiriirka Caalamiga ah
Qaybta cilmi nafsiga
Qaybta cilmi nafsiga bulshada iyo Waxbarasho
Institute for Sciences Warfaafinta iyo Technologies Security
Division for Security Information
Division for Systems Information
Machadka Daraasaadka Oriental iyo Qadiimiga ah
Division for Falsafadda
Machadka Daraasaadka Sare ee Humanities ah
Institute for History Ruush
“Ruush Anthropology School” Institute
Social Anthropology Research iyo Xarunta Waxbarashada
Xarunta Daraasaadka Diinta
Xarunta Cilmi Ruush-American Study iyo Daraasaadka kitaabiga ah iyo Yuhuudda
Ruush-American Center Waxbarashada ee Daraasaadka American
Xarunta Cilmi-waxbarasho Programs Cognitive iyo Technologies
Ruush-Swiss Center of RSUH
Ruush – Swedish Center for Education and Research
Ruush – Xarunta Cilmi Turkish Waxbarashada iyo
The Depatment of Studies Iran
Graduate School of Dhaqammada Yurub
The College of Humanities ah
Art Design Xarunta
Guddoomiyaha taariikhda scence
University Public Moscow, asaasay 1908 iyada oo loo marayo hindisaha of Alfons L. Shanyavsky, sokoeye iyo qudbad Ruush of arts, door gaar ah waxbarashada Ruush.
Illaa 1918, waxa ay ahayd xarunta jaamacadda Russia ee ugu horeysay "free" xadidneyn by xadeynta rasmiga ah iyo kuwa u furan yahay qof walba "sida runta ah harraadsan, waayo, aqoon". Waxaa fulin mabaadiida horumar waxbarasho kale oo lala aasaas dhawaaqa tacliinta laga heli karaa dhammaan.
In 2012, Ruush State University for Humanities u dabaal ah 100th guuradii koowaad ee ay dhismaha ugu weyn, taas ooiska University Public Moscow ka hor inta Ruush Revolution ee 1917.
Moscow Institute for State History iyo Archives la aasaasay 1930 ku takhasusay cilmiga archive tababarka.
Muddo sanado ah waxa ay noqotay xarun cilmi tacliimeed. In raad ay arkiifiyo ee meelaha taariikhda iyo kaarto kaabayaal sida daraasadda ilaha aasaasiga ah, cilmi akeoloji iyo palaeontology, waxaa u suurtagashay in ay dhawraan ka ugu fiican ee dhaqanka cilmi-Ruush.
By bilowgii 1990 machadkan gaarey heer ee "jaamacadda", kaas oo si dabiici ah u sahlay in ay noqoto waxyaalaha qalbiga ku jira dhismaha ee RSUH, taas oo la aasaasay 1991.
Dhowr waaxaha RSUH ku yaalaan albaabka soo socda si ay Kremlin. Waxaa macno ahaan waa masaafad a socodka 5 daqiiqo. Sayidka ardayda ku raaxaysan karaan naqshadaha rus Qarniyadii iyo sidoo kale wadnaha aad u of Moscow, ay wadada ugu weyn Tverskaya.
Ruush State University for Humanities waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeeysa ee Russia. Iyada oo ku saleysan dhaqanka qarnigii-dheer, waxaa sidoo kale qarka u yeelay qarkii goynta ah tabo cusub ee.
Ma rabtaa wada hadlaan Ruush State University for Humanities ah ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Ruush State University for Humanities ku Map
Photos: Ruush State University for Humanities ah rasmiga ah Facebook
Ruush State University ee dib u eegista Humanities
Ku biir si ay ugala hadlaan of Ruush State University for Humanities ah.
Moscow Technical University of Communications iyo Aqbaarta Moscow
Novosibirsk University Technical State Novosibirsk